How to easily set up WiFi? ﻿
WiFi အားမည်သို့ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရမည်နည်း?
များစွာသောသုံးစွဲသူများအဖို့ မှာတော့ အိမ်သုံး ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် WiFi ဖမ်း ယူစက် (WiFi Router) ကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ဒီအရာက မကြာခဏဆိုသလိုတော့ အမှန်တကယ်လုံလောက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သင့်ဆက်သွယ်မှု၏ လုံခြုံရေးနှင့် အဆင့်မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးချနိုင်ဖို့ကို သင်လိုလားတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ setting များကို ပိုမို၍အာရုံစူးစိုက်မှုရှိထားသင့်ပါသည်။ အောက်ပါအချက်များဟာ အိမ် သုံးကြိုးမဲ့ကွန်ယက်နှင့် WiFi router တို့ကို ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့အကြံပြုချက် အချို့ဖြစ်ပါတယ်။
WiFi လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့် network ၏ အမည်ကို မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း?
များသောအားဖြင့် လိုအပ်သည့်အချက်တစ်ခုမှာ WiFi လျှို့ဝှက်နံပါတ်အားပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာတွင်အကြောင်းပြချက်ပေါင်းများစွာရှိနိုင်ပြီး “0Bsr3lRvwQ563gf” ဟုမှည့်ဆိုထားသည့် လျှို့ ဝှက်နံပါတ်အား အခြားသူတစ်ဦးကိုပေးဖို့ရာမှာ အဆင်မပြေနိုင်သည့်အချက်နှင့် ကွန်ယက်တစ်ခုလုံး ၏ လုံခြုံရေးပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်တို့ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။ WiFi ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အား ပြောင်းလဲခြင်းသည် router တစ်ခုအတွင်းရှိ အဓိက setting များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ သင့် ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ပြောင်း လဲရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းတစ်ခု (ဥပမာ - ကွန်ပြူတာ၊ Laptop) မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့် router ၏ IP လိပ်စာအား အင်တာနက် browser ၏ လိပ် စာဘားတွင်း ရိုက်ထည့်ပြီးနောက် confirm ကိုနှိပ်ပါ။ သင့် router၏ မူရင်း IP address ကို အညွှန်းစာ၊ သို့မဟုတ် control panel/ ststem preferences များမှရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ထည့်သွင်းလိုက်သောလိပ် စာအား loading ပြုလုပ်ပြီးပါက login dialog ကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ဟာ login name နှင့် password ကို manual အတွင်းထပ်မံရှာဖွေထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Factory setting များတွင် အမည်မှာ “admin” ဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက်စကားဝှက်မှာလည်း “admin” ဖြစ်ပါသည်။ Log in ပြုလုပ်ပြီးသောအခါ router ၏ administration ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ premium WiFi router အပါအဝင် ခေတ်မှီ WiFi router များတွင် အလွန်တိကျသော ဖော်ပြမှုများပါရှိ ပါသည်။ သင့်ရဲ့ password setting အားရှာဖွေရန်သင့်အနေနဲ့ ခက်ခဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Network အမည်များနှင့် administrator login အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်း setting အတွင်းတွင် ပြောင်းလဲမှုပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Parental lock (မိဘများမှ ကန့်သတ်မှုများထားရှိခြင်း) ကိုမည်သို့ပြုလုပ်သတ်မှတ်နိုင်မည်နည်း?
သင့်ရဲ့ကလေးများကို အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အန္တရာယ်ရှိပြီး သင့်လျှော်မှုမရှိသော website များမှ အကာ အကွယ်ပေးလိုပါသလား? အဆင့်မြင့် WiFi router များတွင် parental lock ပါရှိပါသည်။ ထိုအရာက သင့်ကို တားမြစ်ပိတ်ဆို့ထားမည့် website များ၏ စာရင်းတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်စေပါလိမ့်မည်။ WiFi router ကိုအသုံးပြုစဉ်တွင် အသုံးပြုသူများ သွားရောက်နိုင်မည့်၊ မသွားရောက်နိုင်မည့် website များအပေါ် သင်ဟာ အပြည့်အဝထိန်းချုပ်မှုပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Parental lock အပြင် အချို့သော စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ်များတွင် အသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ် အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - အများဆုံးကူးသန်းနိုင်သော data ပမာဏအား သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသော ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုစည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်နိုင် ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ Router administration တွင်လည်း parental lock နှင့် advanced function များကို တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် အခမဲ့ smartphone app များကို သင်တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် အဆင်ပြေနိုင်စေရန်အတွက် ပေးအပ်ထားပါသည်။ Application အား install ပြုလုပ်ပြီးနောက် router နှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် သင်သည် router function များ ကို သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်မှ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်ထားရှိရမည့် WiFi router နှင့် network setting များ
WiFi router နှင့် အိမ်သုံးကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တို့ကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များကိုသိရှိထား ခြင်းက သင့်ရဲ့ router သည် ၁၀၀% အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမနေသည့်အခါများတွင် ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ် မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်တွင် အသုံးဝင်မှုရှိစေပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ မတည်ငြိမ်သော အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် WiFi channel (WiFi လိုင်း) ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်း။
သင့်ကိုယ်သင် configuration option များနှင့် ရင်းနှီးအောင်ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့လုပ် ဆောင်ရာတွင်ထိုအရာကရှုပ်ထွေးမှုမရှိလှပါဘူး၊ အတွေ့အကြုံအလွန်နည်းတဲ့ အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှပင် setting များကိုပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင်သင်သည် network လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ router အား အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် စတင်အသုံးပြုလိုက်ပါ။